Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 56
Inona ny aretina ary inona no fifandraisana misy bakteria amin'izany?
Ny aretina ao amin'ny vatana dia toe-javatra izay tsy mahazatra loatra ny lalànan'ny taova iray na maromin'ny vatana, ka tsy voavaha ny asan'ny taova na ny taova na ny asan'ny singa iray dia hatsipy ao amin'ny ordinatera fifandraisana amin'ny hafa na hafa. Ny vokatr'izany dia ny singa mifandraika amin'ny natiora dia tsy mifandray intsony amin'ny elanelan'ny olombelona-izany hoe, miaraka amin'ny fitsipika mifototra amin'ny vatana.
Ny aretina dia vokatry ny tsy fihinanana, ny fisotroana, ny fofona, ny fisainana ary ny fisainana diso. Ny aretina dia fanakanana ny fiasa ara-dalàna ny singa fototra izay mamorona sy miasa ny taova amin'ny vatana.
Ny bakteria dia alim-borona, zavamaniry mikroskopika, ankapobeny, toy ny endriky ny kodiarana, toy ny lance, toy ny tady. Ny bakteria dia lazaina fa antony marin'ny aretina mifindra amin'ny aretina sy ny tsy fahasalamana, ary ny aretina amin'ny lalàm-panorenana.
Na dia be loatra aza ny bakteria amin'ny aretina, dia tsy ny antony mahatonga ny aretina akory ny bakteria. Ny bakteria dia mivoatra raha vantany vao omena ny fepetra fampitomboana azy ireo, ary ny toe-piainana dia vokatry ny fisainana diso, ny fihetsika, ny fifohana rivotra, ny fihinanana sy ny fisotroana. Ny bakteria amin'ny habetsaka ampy hamokarana aretina dia tsy misy toerana izay tsy nanomezan'ny olona azy tany lonaka ho an'ny fampielezana azy ao amin'ny vatany. Amin'ny ankapobeny, ny fanamafisana sy ny fambolena ao amin'ny rafi-pandaminana sy ny ala dia matetika no miteraka antony mahatonga ny bakteria hahita trano sy fivoarana tsara.
Inona no homamiadana ary mety ho sitrana izy, ary raha sitrana izy, inona no fanasitranana?
Ny kansera no anarana nomena ny karazam-borona vaovao ratsy eo amin'ny vatan'olombelona, ​​izay mitombo amin'ny vola arak'ilay vatosoa mahazatra, ary matetika no maty. Ny kansera dia iray amin'ireo aretina izay mitombo amin'ny fandrosoan'ny sivilizasiona. Ny kolikoly dia mamaritra aretina, na dia eo aza ny fepetra fisorohana sy ny fitsaboana amin'ny fomba mahazatra izay manafoana ny karazana aretina izay nanjaka teo aloha. Ny fiainana manakaiky ny fiainan'ny olombelona dia ny biby sy ny fomba voajanahary amin'ny fiainana ny vitsy dia ny aretina; Fa ny volo avo kokoa ny vatana ary ny lavitra dia nesorina avy amin'ny fepetra tsotra, ny mety ho mora amin'ny aretina. Miaraka amin'ny fandrosoan'ny fotoana dia mihamitombo ny karazana aretina izay tsy mbola fantatra, ary ny aretina tonga matetika matetika. Ny avo kokoa ny fampandrosoana ny saina izay mety kokoa amin'ny aretina dia ny vatany dia tsy misy mitovy na ny fepetra ara-batana. Tamin'ny taonjato fahasivy tamin'ny taonjato farany dia nisy aretina vaovao iray, fantatra amin'ny anarana hoe la grippe, nanamboatra ny endriny ary niely haingana be noho ny ampahany betsaka amin'ny faritra sivily eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny toe-javatra toy izany, dia misy tranga homamiadan'ny kansera.
Misy sela homamiadana izay ara-batana. Maro amin'izy ireny ny olona tsirairay, saingy matetika izy ireo no mivoatra, ka tsy mahamarika azy ireo. Mbola misy kanseran'ny kansera, ary tsy ara-batana izany fa astral. Ny mikraoba matetika dia hita ao amin'ny vatana astral, nefa tsy hita izany; izany hoe, tsy miteraka ny fivoaran'ny sela homamiadana izany. Misy fepetra sasany takiana amin'ny asa sy ny fampitomboana ny kanseran'ny homamiadana. Ny roa amin'ireto fepetra ireto izay matetika no porofo dia ny toe-javatra misy ny vatana ara-batana matotra, izay manamarika ny faha-40 taonany sy ny ambony, ary ny toe-tsaina misaina tsara indrindra amin'ny tahotra. Noho izany, ny tahotra sy ny taona efa ho efapolo taona dia mankasitraka ny famokarana mikraoba sy ny fampivoarana sy ny fampitomboana ny sela homamiadana.
Azo sitranina ny kansera ary sitrana. Nisy valiny momba ity fanontaniana ity sy ny fitsaboana ny homamiadana "Fotoam-pirahalahiana miaraka amin'ny namana" ao amin'ny lohahevitry ny THE WORD, Septambra, 1910, Vol. XI., No. 6.